Iindaba - Izinto ezininzi zinceda i-ISO eNgilane kwimozulu enzima
Imimandla kunye nehlabathi, kunye namalungiselelo kunye nokulibaziseka kwemozulu ebandayo, kuncede i-ISO New England ukuba isinde ebusika ngo-2014-15 ngemicimbi embalwa yokusebenza kunye namaxabiso amabi kakhulu, utshilo u-ISO ngolwe-Sihlanu.
Kwingxelo eya kwiKomidi yaBathathi-nxaxheba yamandla ePhuli yaseNew England, uVamsi Chadalavada, u-Sekela Mongameli oyintloko we-ISO eNgilane kunye negosa eliyintloko lokusebenza, baqaphele ukuba amaxabiso e-ISO angaphambi komhla wamaxabiso aselunxwemeni ayi- $ 64.25 / MWh ngo-Matshi, ezantsi i-45.7% ukusuka ngoFebruwari ukuya ezantsi. I-42.2% ukusuka ngoMatshi 2014.
Phakathi kwamalungiselelo ancede i-ISO New England kulo nyaka ibe yiNkqubo yayo yokuXhomekeka ebusika, ngokwengxelo, evuza oomatshini bokugcina ngokugcina uluhlu lweoyile olwaneleyo okanye ikhontrakthi yokubonelela ngegesi yendalo, ngokwengxelo ethiwe thaca kwabachaphazelekayo.
Ukugcwala komhlaba kwe-LNG, kudityaniswe namaxabiso aphezulu endawo kwingingqi ebusika ka-2013-14, kukhokelele ekubeni i-LNG eninzi ifumaneke kwingingqi.
Ukwehla okuthe kratya kwamaxabiso e-oyile okhe kwenzeka ukusukela ngehlobo ephelileyo kwenza "ukuveliswa kwe-oyile kusoloko kunezoqoqosho ukuqhuba kunokuveliswa kwegesi yendalo ... [ngaloo ndlela] kunciphisa ukungazinzi kwexabiso lombane negesi," utshilo u-ISO.
Ixabiso eliphakathi legesi kwindalo yaseNew England lalimalunga ne- $ 7.50 / MMBtu ngalo Matshi, xa kuthelekiswa ne- $ 16.50 / MMBtu ngoFebruwari, utshilo u-ISO.
INew England ibinodisemba omninzi, kwaye eyona mozulu inzima yalibaziseka de kwaba nguFebruwari, "xa iintsuku zazinde kwaye ukusetyenziswa kombane kwakusezantsi," itshilo i-ISO.
INgilane entsha ine-3% ngaphezulu kweentsuku zokufumana ubushushu ukusukela ngoDisemba ukuya kuFebruwari, xa kuthelekiswa nexesha elifanayo lika-2013-14, kodwa i-HDD iyonke ye-HDD yayimalunga ne-14% ngaphantsi koDisemba ka-2013, ngelixa i-HDD kaFebruwari iyonke yayimalunga ne-22% ngaphezulu kukaFebruwari. Ngo-2014.
Enye into ebusika obungabonakaliyo be-ISO eNgilani yayikukusebenza kwamandla, ukucheba ukusetyenziswa kwamandla kunye nemfuno ephezulu, utshilo u-ISO.
I-ISO New England itye malunga ne-10.9 nge-Matshi ngo-Matshi, xa kuthelekiswa ne-11 Twh ngoFebruwari nango-Matshi 2014, ngokwengxelo.